Toamasina : potika ny fihariana sy ny fizahantany noho ny…pesta | NewsMada
Toamasina : potika ny fihariana sy ny fizahantany noho ny…pesta
Miantraika mivantana amin’ny vidim-piainana ankapobeny, sy ny fanondranana entana any ivelany ary ny fizahantany ny firongatry ny pesta eto Toamasina. Tsy manana vina hamahana izany ny fitondrana.
Mazava ankehitriny fa tsy voafehy ny pesta ary mipoitra tsikelikely ny fiantraikany amin’ny lafin-javatra maro, indrindra ny toekarena sy ny sosialy. Miraviravy tanana ny vahoaka sy ny mpandraharaha amin’ny lafiny fihariana. Nanazava ny mpandraharaha iray eto Toamasina, fa hitotongana tanteraka ny toekaren’ny Malagasy amin’ ity taona ity, raha tsy voafehy haingana ity valan’ aretina pesta ity. Efa nisy tranga toy izao nandritra ny valan’aretina « Dengue” (1998) sy ny Chikunginia » (2010), nandripaka ain’ olona maro. Vokatr’ ireo, averin’ny mpandraharaha vahiny mpanafatra entana ny vokatra avy aty Madagasikara, toy ny letisia, ny makamba, ny lavanila, satria natahoran’izy ireo sao mitondra ny valan’aretina any aminy.
Eo koa ny fahatapahan-jiro mateti-pitranga eto Toamasina, mahatonga ny tsy
fandriampahalemana eto an-tanana. Tsy mandeha ny fihariany, simba ny fitaovana, sorena amin’ny fandoavana ny faktioran’ny Jirama ny mpanjifa satria tsy mifanaraka amin’ny fampiasany herinaratra ny tolotra omena azy. Mitarika ny fahamaizan-trano matetika ny haratsian’ny fotondrafitrasan’ny Jirama. Manginy fotsiny ny fiakaran’ny vidim-bary, foto-tsakafon’ny Malagasy. Raha mitohy izao, ahina ny hisian’ny fipoahana ara-tsosialy.
Mandositra ny mpizahatany
Hanapotika ny toekarena koa ny fitotongan’ny fizahantany. Ho an’ i Toamasina, maro ireo mpizahatany nanafoana ny famandrihany any amin’ireo trano fandraisam-bahiny lehibe. Nody alohan’ny fotoana koa ireo vahiny efa eto an-toerana na tsy tapitra aza ny fetr’andro tokony nijanonany, noho ny tahotra amin’ny pesta.
Nivily lalana koa na nanemotra ny fotoana handalovany aty Toamasina ny sambo vaventy mpitondra mpizahatany, fa aleon’ izy ireo nihazo ny Nosy Maorisy sy Seisela.
Tsy vitsy ihany koa ireo trano fandraisam-bahiny efa nampiato kely ny mpiasany.